Dowladda Soomaaliya iyo hay'adda lacagta adduunka oo gaaray heshiis ku saabsan dayn cafinta - Axadle Wararka Maanta
Jimco, May, 20, 2022 (AX) – Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hey’adda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa gaaray heshiis ku saabsan geeddi socodka Deyn Cafinta iyo dib-u-eegista Wajiyada 2aad iyo 3aad Barnaamijka ECF ee dib-u-habeynta hannaanka Maaliyadda iyo Horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya.
Inkastoo 18 kii bilood ee lasoo dhaafay ay jireen caqabado, haddana IMF waxay dowladda Soomaaliya ku ammaantay horumarka laga gaaray dib-u-habaynta dakhliga gudaha iyo xoojinta maamulka maaliyadda dawladda.IMF waxa ay sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu kor u kacay sameeyay dhib kasta oo ka jiro dalka, sida Abaaraha.
Hey’adda IMF waxa ay ay ballan qaaday in ay si dhaw ula shaqayn doonto dowladda cusub iyo Hey’addaha Maaliyadda dalka. “Waxa aan ku faraxsanahay in Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hey’adda IMF ay gaareen heshiis muhiim u ah geeddi socodka deyn-cafinta iyo Dib-u-eegista Wajiyada 2aad iyo 3aad Barnaamijka ECF ee dib-u-habeynta hannaanka Maaliyadda iyo Horumarinta dhaqaalaha dalka”.
Sidaa waxaa yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.Go ‘aan IMF ayaa yimid kaddib markii ay dhammaatay doorashadii Madaxweynaha Soomaaliya oo 15 bishaan May dalka ka dhacday.
PFA Vertu Motors League Two Fans’ Player of the Year